NTFS in baruurta - badalo NTFS in baruurta aan Loss Data
> Resource > Utility > Beddelaan NTFS in baruurta Waxaad u aan Loss Data
Baruurta waa nidaam file ka weyn marka la barbardhigo NTFS, laakiin waa mid aad u la jaan qaada tiro balaadhan oo ah aaladaha kaydinta iyo nidaamyada hawlgalka. Taasi waa sababta dadka isticmaala qaar ka mid ah doonayaan inay ka badalo NTFS in baruurta . Sida aan ognahay in diinta baruur NTFS si fudud ku shaqeeya kartaa Windows dhisay-in utility, laakiin ma karaan badalo NTFS dib ugu baruurta leh oo aan xog gaartay sababtoo ah Windows oo dhan ma haystaan ​​qalab kasta oo taas loo sameeyo. Sidaa darteed, su'aasha ku saabsan sida loo badalo NTFS in baruurta had iyo jeer waxaa lagu arki karaa in forums.
Sida loo badalo NTFS in baruurta?
Tan iyo Windows ma laha qalab si loogu badalo NTFS in baruurta , waxaad isticmaali kartaa qalab maamulka disk si hawsha ay u dhammaystiraan. Si loogu badalo nidaamka file, gaar ahaan Risaalo oo leh macluumaad qiimo aad, doorashada qalab xirfadeed waa mid aad u muhiim ah. The Management Disk ee Spotmau PowerSuite 2011 waa qalab sax ah si loogu badalo NTFS in baruurta.
Hel Spotmau PowerSuite 2011 halkan.
Burcad Spotmau PowerSuite 2011, riix 'Management Disk' tab, ka dibna riix 'hanad Barzakh'.
Tallaabada 1 Dooro xijaab disk ama baruurtii. Halkan waxa aad ka eegi kartaa nidaamka file aad kombiyuutarka.
Tallaabada 2 Barzakh Click Maamulka iyo "Beddelaan" button.
1. Si loogu badalo NTFS in baruurta, waxa kale oo aad dooran kartaa Risaalo ka blocks ka, xaq riix mid loogu tala galay dooro shay ee menu pop-up ah.
2. Risaalo Hubi hor diinta iyo guji 'Haa' in la sii wado.
Tallaabada 3 Markii uu dhamaystay xijaab jeegga, riix OK si loogu badalo.
Waxaa jira xaalad ah in aad file noqon doonaa baadil Eebe ka dib markii NTFS si aad u convertion baruurta: Your xijaab waa in AANAY ku jira faylka hal ka badan 4G. Fadlan hubi in aad leedahay file ma ka badan 4G in Risaalo oo aad rabto in aad si loogu badalo NTFS inay samayn.
Ka dib markii diinta xijaab, suuqa kala fariin arbushin doonaa.
Sida software ah oo khibrad leh maamulka disk, Management Disk ee Spotmau PowerSuite 2011 sidoo kale abuuri kartaa, tirtirto, resize, kala, darsamaan, qaab, qariyaan, unhide, dhigay xijaab firfircoon, iwm maxay ka badan, si aad u maamusho disk ama xijaab, waxa aad u baahan tahay inay sameeyaan waa lagu magcaabo yar mouse. No walwal ku saabsan khasaaraha xogta inta ay socoto.
Ilowday Password Yahoo? Hadda Soo Celinta Waxaa!